Bhubaneswar Puri 1 Night / 2 Mazuva - Mafambiro Akanaka India- Tour Operator Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Zvimwe Kubatanidzwa - Zvokufambisa
KUDZIDZA KUTENDA : Per Person Per Tour Basis (MuRupe) Pasi pemitengo haigoni panguva yeFestive (Durga puja period, Gore Idzva & Chistmass period, Zororo reZimbabwe, RathaYatra Nguva, Nguva yeHoli)
Motokari Inowanikwa Kwete yePax / Rooms Economy Package Standard Package Deluxe Package Luxury Package
Ac Dzire / Indigo Minimum 02 Pax (01 Room) Rs.3950.00 Per Person Per Tour Rs.5020.00 Per Person Per Tour Rs.6040.00 Per Person Per Tour Rs.8600.00 Per Person Per Tour
Zvimwe Mukuru ane Zvinyorwa Zvinyorwa / Bhedha NA Rs.700.00 Per Person Per Tour Rs.1000.00 Per Person Per Tour Rs.1636.00 Per Person Per Tour Rs.3300.00 Per Person Per Tour
Rubatsiro paKusvika & Kubva.
Accommodation pa twin Sharing Basis nechingwa chete. (Cherechedza: Pasi paMayfair mazai, puri Din Dinner ichave iri).
Exclusive Ac motokari yekuendesa mberi nekuona nzvimbo. (Cherechedza: motokari haichazogadziriswa iyo inowanikwa kune muenzi maererano nekufamba nekutsvaga kusvika kune imwe nzvimbo).
Yose mitero yehotera.
Chero mhiri wepasi rose / Domestic Air Inoshandiswa kana pane zvakataurwa zvakasiyana.
Mutauro weChirungu mutungamiri / kuendesa zvikwereti Airport Tax.
Bhedha yepamusoro Zvokudya zvose (kunze kwezvataurwa pamusoro apa).
Maitiro evanhu pachavo anoshandiswa zvakadai sekufonera, Kushambidza, kunyorera / kunwa doro, kudya kwemasikati nezvimwewo,
Kamera mari pazvivako.
Chikumbaridzo OR TEMPLE Mipiro yekupinda Ngarava inofambisa mari / Inishuwarenzi.
Chero chero hupi hupi hwePorterage huri paIndaneti / Rail
ZUVA 01: BHUBHESHARI - PURI
Paunosvika kuBhubaneswar Airport / railway station mumangwanani / Noon, tora & uende kuPuri. Ernoute iwe unoshanyira Dhauli (Ashokan Rock Edict uye Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Konark Sun Temple (inozivikanwa nenyika inozivikanwa se "Black Pagoda"), Ramchandi Temple & Chandrabhaga Beach. Tarisa kuPuri hotera. Freshen up & relax at beach / shopping at beach market. Usiku hwoga hunogara paPuri hotera.
ZUVA 02:PURI - BHUBANESWAR (DEPARTURE)
Pakutanga kushanyira mangwanani kuna Ishe Jagannath Temple (kwete veHindu havabvumirwi) kutarisa mangwanani arati. Dzokera kuhotera & itai kudya kwenyu kwoga. Zvadaro motamira kuBhubaneswar. Pano iwe uchashanyira kuTemberi temberi se: Lingaraj Temple, Rajarani temberi, Mukteshwar Temple, Nandankanan Zoo (Yakavharwa musi weMuvhuro uye yakasununguka kubva ku7.30 AM kusvika 5.30 PM), Caves-Khandagiri uye Udayagiri Jain mapango. Manheru anonaya kuBhubaneswar airport / railway station nokuda kwekufamba kwako.
Iva wokutanga kuongorora "Bhubaneswar Puri 1 Night / 2 Days" kukanzura mhinduro